गोकुल बाँस्कोटालाई लाग्यो ७० करोडको झट्का — Imandarmedia.com
गोकुल बाँस्कोटालाई लाग्यो ७० करोडको झट्का
काठमाडौ। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटालाई ठूलो झट्का लागेको छ । पूर्वसंचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बास्कोटालाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा झट्का लागेको हो । एमाले सांसद एवम् पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको निर्वाचन क्षेत्रका दुवै प्रदेश सांसद माधब नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा लागेपछि झट्का लागेको हो ।
बाँस्कोटाको निर्वाचन क्षेत्र काभ्रे २ को प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ का लक्ष्मण लम्साल र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र २ का बसुन्धरा हुमागाईं दुवैले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्। २०७४ को निर्वाचनमा लम्सालले २७ हजार ६ सय २१ मत ल्याएका थिए भने हुमागाईंले २८ हजार ६ सय ७७ मत ल्याएकी थिइन्।
एमाले विभाजनपछि बागमती प्रदेशका १२ सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् । दुवै प्रदेश सांसद माधब नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेपछि गोकुल बाँस्कोटालाई गम्भिर झड्का लाग्ने देखिएको छ ।
मन्त्री भएका बेलामा ७० करोड घुस लिएको आरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । उनको यो मुद्धा अहिलेपनि विचाराधिन अवस्थामा छ ।
यस्तो थियो ७० करोडको पहिलो झट्का
पुर्ब सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सेक्यूरिटी प्रेस खरिदका क्रममा प्राप्त हुने कमिसनसम्बन्धी विवादमा मुछिएका थिए । लेखा समितिमा छानबिनका क्रममा रहेको विषयसँग सम्बन्धित अडियो तत्कालिन पदमा बाहल हुदा सार्वजनिक भएको हो। यस्तो थियो जिटल प्ल्याटफर्ममा घुसको अडियो। तल दिइएको छ सुन्नुहोला।
सेक्यूरिटी प्रेससँग सम्बन्धित एक प्रतिनिधि विजयप्रकाश शर्मा मिश्रसँगको कुराकानीका क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले आफ्नो कार्यकक्षमै बोलाएर कमिसनको अंकबारे सांकेतिक कुराकानी गरेका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले कमिसनलाई घुस मानेको छ र सार्वजनिक पदमा बस्नेले कमिसनको लेनदेख गर्नु भ्रष्टाचार मानिने उल्लेख छ ।
अडियो कुराकानी अनुसार, मन्त्री बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँको कमिसनमा डिल गरेका छन् । उनले कमिसन बढी हुने उपायका बारेमा सल्लाह गरेका छन् । ७० देखि ७५ करोड रुपैयाँ कमिसन आउँदा त्यसको ७० प्रतिशत रकम मन्त्रीलाई हुने कुराकानीमा स्पष्ट सुनिन्छ । हाम्राकुरा डटकममा राखिएको अडियो अनुसार मन्त्रीको जिज्ञासा मेट्ने क्रममा त्यो अंक करिब ५५ करोड रुपैयाँ हुने बताइएको छ ।
कान्तिपुरसँगको कुराकानीका क्रममा ती प्रतिनिधिले, अडियोबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएपनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताए । ‘मैले सचिवालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई अडियो नै पठाएको दुई महिना भयो,’ ती प्रतिनिधिले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँको कुनै प्रतिक्रिया नआउँदा आश्चर्य लागेको छ । लेखा समितिमा समेत उजुरी छ ।’
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय मन्त्री बाँस्कोटा पनि आफ्नो अडियो रेकर्ड गरिएकोबारे जानकार थिए । मन्त्रीको कार्यकक्षमै रेकर्ड भएको झण्डै ३ मिनेटको कुराकानी मोबाइलबाट भिडियो मोडमा खिचिएको र पछि अडियो सार्वजनिक भएको हो ।
मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा : ह…
विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : सकेसम्म एमओयू गर्ने कि भन्ने हिसाबले आउन थालेको छ। तपाईंहरुको -कार्यक्रमको बारेमा एम्बेसडरले छुट्टै कुरा गर्न चाहेको छ। मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा : ठीक छ। विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : त्यसका लागि तपाईंले टाइम मिलाइदिनुपर्‍यो। मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा : मिलाइदिन्छु।
विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : त्यसका लागि(कमिसनका लागि) हामी आउट अफ ट्रयाक जाने कि ? तपाईंले भनेअनुसार नै गर्ने लु भन्नुस। मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा : अब। क्यापासिटीको कुरा। विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : कुराचाहिँ मैले राखेको छु उनीहरुलाई। मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा : उनीहरुलाई नर्मलमा ५० भन्ने?
विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : त्यसमा नर्मलमा मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा : उनीहरुले कति निकाल्छन् ? विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : यस्को टोटलको पर्सेन्ट निकाल्ने हो। मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा : टोटल कति निस्कन्छ त्यो हेरौं। विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : केही न केही त भइराछ त्यही बेसमा जाने हो। बेसचाहिँ तपाईंहरुको उसमै जाने हो हामी।
मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा : सकेसम्म २५ देखि २७ अर्बमा सकाउन पाए हुन्थ्यो। मानौं २५ निस्क्यो भने कति हुन्छ? विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : ७० जति आउला कि ! आउट अफ ट्रयाक नजाँदा ७० जति आउला कि। मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा : तपाईंलाई के गर्छन्? छुट्टै गर्छन्?
विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : टोटल ७४ जति आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यसमा ७० प्रतिशत तपाईंहरुलाई दिने हो, हामीले ३० प्रतिशत राख्ने हो। यो एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा : त्यो भनेको कति हुन्छ? विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : ५४ देखि ५५ करोड तपाईंहरुलाई दिने १५ देखि १६ हामीले राख्ने। -हामीले पनि त अलि अलि राख्नुपर्‍यो नि। आउट अफ ट्रयाक गइयो भने..
मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा : अनि यो कर्मचारीसँग कस्ले कुरा गर्छ नि? विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : त्यो कुरा तपाई गर्नुस। मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा : एउटा के नगर्नुस् भने यी मु…कर्मचारीलाई यस्तो कुरा गर्न लाग्यो भने -यिनले हेप्छन्। त्यसकारण यो कुरामा तपाईं आफै लाग्नुस। कुरा बुझ्नुभो..
विजय प्रकाश मिश्र शर्मा : त्यसो भए म आफै लाग्छु। उसले त बनाएर राखिसकेको छ। मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा : त्यो मु..ले बनाएको त ३५ अर्बको छ। अब यता २७ अर्ब निस्क्यो भने २८ अर्बको बनाउनुस्।
यो पनि पढ्नुहोस् : पैसा छाप्ने सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा लेखा समितिले थाल्यो छानबिन
चना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले फ्रान्सबाट किन्न लागेको पैसासमेत छाप्ने क्षमताको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा अनियमितताको आशंकामा संघीय संसदको सार्वजिनक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त विषयमा सोमबारबाट छानबिन थालेको छ । समितिमा परेको उजुरीका आधारमा लेखा समितिले प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका विषयमा प्रिन्टिङ प्रेसका विज्ञ विजयप्रकाश मिश्र र सफ्टवेयर इन्जिनियर सुधीरराज पाण्डेसँग छलफल गरेको हो । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पाण्डे प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ थिए ।
समितिको बैठकमा विज्ञको रूपमा उपस्थित मिश्रले लागत मूल्यभन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई खरिद अनुमति दिन लागेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
मिश्रले ९० देखि ९५ मिलियन युरो पर्ने मेसिनलाई १सय ५५ देखि १सय ६० मिलियन युरो प्रस्ताव गरिएकोले त्यसमा अनियमितताको आशंका रहेको बताए । उनले यस विषयमा संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । ‘सम्बन्धित कम्पनीले गर्दा ९० देखि ९५ मिलियन युरो पर्छ । होल सोलुसनसहितको गर्दा २ सय मिलियन युरो पर्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले १७-१८ मिलियन युरोको मेसिन ल्याएर १ सय ७५ मिलियन युरो प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई अनुमति दिँदैछ । होल सोलुसनसहित ९० देखि ९५ मिलियन युरो पर्ने मेसिनलाई १ सय ५५ देखि १ सय ६० मिलियन युरो सरकारले कस्तो अवस्थामा खर्च गर्दैछ भन्ने कुरा आफैँ विचार गर्नुहोस् ।’
पूर्व सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको प्रस्तावमा गत मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले फ्रान्सेली र जर्मनी कम्पनीसँग जीटुजी मोडेलमा उक्त उपकरण खरिद गर्न सम्झौता तयारी गरेको छ ।
समिति सभापति भरतकुमार शाहले जीटुजी मोडेलमा यसअघि पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यस विषयमा छानबिन गर्ने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई लत्याउँदै भ्रष्टाचार गरेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।